Iflethi epholileyo ephakathi, indawo yokupaka yasimahla, isaphulelo sokuhlala ixesha elide - I-Airbnb
Iflethi epholileyo ephakathi, indawo yokupaka yasimahla, isaphulelo sokuhlala ixesha elide
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSilvia
Indlu entsha epholileyo, i-40 sqm, i-10 min ukuhamba ukusuka eDuomo kunye nokusuka eLake.
Ifakwe kwindlela ezolileyo kunye nesakhiwo sembali, indawo yesi-3, ngaphandle kokunyuswa. I-WiFi ekhawulezayo ifakiwe. Ikhitshi elixhotyiswe ngeketile, umatshini wekofu, umatshini wokuhlamba, ulungele ukuhlala kamnandi. Igumbi lokulala / igumbi lokuhlala elinebhedi epholileyo ephindwe kabini + ibhedi yesofa ilungele abantu abayi-2/3.
Irhafu yabakhenkethi ilindeleke ekufikeni, 2 € ngeprs/ngobusuku.
Indawo yokupaka yasimahla ifakiwe.
Iflethi icocwa kulandela isindululo se-WHO.
Ifulethi lihlotshiswe ngothando kunye nenkathalo ngoncedo lomhlobo wobomi bonke, umakhi wezakhiwo.
Sithathele ingqalelo inkcukacha nganye encinci, ukwenza ukuhlala kwakho kukhululekile kwaye kumnandi.
Indawo yokuhlala ikwimizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka ezivenkileni nakwiindawo zokutyela, imizuzu emi-5 ukuhamba ukusuka kwisikhululo saseComo Nord Lake, i-10 min ukusuka kwipier yesikhephe kunye ne-funicular, i-15 min ukuhamba ukusuka kwisikhululo saseSan Giovanni Como.
Unokukhetha ukungena ngokwakho okanye ungamkelwa kwindawo ohlala kuyo, njengoko ukhetha. Ixesha lokungena liguquguquka.
Apho kunokwenzeka, sisebenzise indlela ezinzileyo: umbane wethu uphuma kwi-100% yemithombo ehlaziyekayo, ngelixa isepha kunye nesepha yeshawa/ishampoo ziqinisekisiwe yi-ICEA.
Indlu icocwa ngokuhambelana ne-WHO kunye noMphathiswa wase-Italiya wengcebiso yezempilo.
4.89 · Izimvo eziyi-130
Indlela intle kwaye izolile kwaye iphakathi. Uya kukwazi ukuhamba uye embindini wedolophu apho ichibi, isikhululo sikaloliwe, iindawo zokutyela kunye nemivalo. Le yeyona nxalenye intle, kuba uya kuyonwabela iholide yakho ukuthatha ixesha lakho, ukuphumla, ukuhlola, ukufumana iDolce Vita yokwenyani.
Iindwendwe zinokukhetha phakathi kokuzihlola ngokwazo okanye ukudibana nazo kwigumbi lokuhlala zigcina imigama efunwa ngumthetho kunye nokunxiba imaski.
Sifumaneka kulo naluphi na ulwazi / imfuno 24 hr.
Inombolo yomthetho: CIR: 013075-CNI-00731